China zenzele amalebula wangasese amalebuli wesitolo esidayisa yonke impahla eyelashes Mink ifektri abakhiqizi | Weiti
Dala Ilebuli Yakho Eyimfihlo Elingaphezulu Kwama-Eyelashes Amanga Mink
1, isitayela se-EDITH 3d mink short del eyelashes & soft cotton band
2, 100% isihluku esenziwe ngezandla mahhala
I-3, i-eyelashes yelebuli yangasese yangokwezifiso enebhokisi lokupakisha le-eyelash
4, Factory intengo ethengiswayo eqondile
I-3D MINK EYELASHES
Fur u-100% woboya be-mink yangempela
√ Ithambile futhi ikhululekile
Label Yenza ngezifiso ilebula yangasese
I-100% yangempela ye-mink ngesihluku
100% ezenziwe ngezandla
Kwenziwe ngentando ibhokisi ilebula yangasese
Izithombe zamahhala nokuklanywa kwelogo kwamahhala
Nge-DHL, FEDEX, UPS, EMS, SF, TNT, NGOLWANDLE
Izinsuku eziyi-3-5 zokusebenza kwesitoko esilungile, izinsuku zokusebenza eziyi-7-20 ezenziwe ngezifiso
I-T / T, i-Paypal, i-West Union, iKhadi lesikweletu
Umhlobiso omuhle wezimonyo
Ama-eyelashes angamanga enza amehlo akho akhanye kakhulu futhi ahehe, aguqule amehlo akho, ama-eyelashes amakhulu futhi acebile, akha umuzwa ongenaphutha wokuqina. Gcizelela ngempela iso. Kulula ukufaka nokususa, ithambile futhi ithokomele ngaphandle kokulimala emehlweni.
Ukunikezwa okumangazayo kwe-3D
1.Ukuthola imiphumela ye-3D kukunika ukubukeka okuthakazelisa kakhulu ongakucabanga. Ilula futhi kulula ukuyisebenzisa, ama-eyelashes angamanga azohlangana ngaphandle komthungo nezinkophe zakho, anikeze ukusebenziseka okuphezulu lapho ugqoke ama-eyelashes futhi ungakhululeki uma ugqoke isikhathi eside.
4.4. I-eyelashes ngayinye ye-3D yamanga i-100% eyenziwe ngezandla ngabasebenzi bethu. Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi, yenza ngezifiso izinkophe zakho ngokusika imikhawulo ukuze ilingane nobude obufunayo.
3.3. Eyelashes ezenziwe ngezandla, umphumela othakazelisa kakhulu futhi omuhle. Umklamo wesayensi wenza kube lula ukunamathela emehlweni.
Ukukhiqizwa okwehlukanisiwe okuningi, ukugqoka okwemvelo nokuphila, kwenze amehlo akho akhanye futhi athandeke.
Yenziwe ngezinwele eziyi-100% mink ngesihluku mahhala, ithambile futhi ikhululekile ukugqoka.
Ngenxa yamehlo nabantu abathandayo, yakhelwe ubude obuhlukahlukene ukuze ihambisane nezidingo zakho.
√ 100% izinwele ze-mink zangempela
√ Ukotini nebhendi elithambile
√ Isikhathi eside kuze kube izikhathi ezingama-25-30
× I-fiber yokwenziwa embi
× Ibhande eliqinile nefayibha engcolile
× Fibre kulula ukuyiphula
ISITOLO LOGO YASEKHAYA
Ngezifiso logo yangasese iyatholakala. Ithimba lethu lokuklama lingasekela ukwakheka kwe-logo yakho, ukuklanywa kwempahla ye-eyelash nesiphakamiso sokuklama.
Ukuqinisekisa imivimbo esezingeni eliphakeme, kusuka kokuqukethwe kuya kwimikhiqizo ye-eyelashes ekulungele, ithimba lethu lokuhlola lihlukaniswe ngamaqembu ama-3 ukulawula izinto, imivimbo engu-semi-kumaliza, ikhwalithi yemivimbo eseqedile. Zonke izinyathelo zizobhalwa phansi emsebenzini wephepha lokulawula ikhwalithi.
Ukukhiqizwa kwe-Lashes okuphelile
Ukupakisha / ububanzi>
Ungayifaka kanjani i-eyelashes yamanga
Ukuhlonza izinkophe zamanga ezifanele zesimo sehlo lakho.
Ngokuya ngokuma kwamehlo akho, qiniseka ukuthi ukhetha imivimbo yesayizi efanele. Isibonelo, uma ukwakheka kweso lakho kufakwe i-hooded, khona-ke i-eyelashes ende yamanga ingakulungela kangcono. Uma unomumo wamehlo oyindilinga ngaphezulu, bese uya kwimivimbo emifushane enikeza ivolumu ethe xaxa.
Qinisekisa indawo yokusebenzela ehlanzekile futhi ekhanyiswe kahle
Bheka, ngibe nezinkinga eziningi lapho ngizithola ngiphuthuma ukufaka isicelo sami senkophe elingamanga egumbini elikhanyiswe kakhulu nabangane bami abalinde ngolaka ukuthi ngibuye sekwephuzile ihora. Kulula ukukhohlwa ukuthi siphatha izingcezu zezinto ezintekenteke, ukusebenzisa ukukhanya kombala we-glam kuzosiza ekuqinisekiseni ukuthi uphatha imivimbo ngendlela efanele futhi kuzoqinisekisa ukuthi ukufaka kwakho iglu eyelash kuzobe kungenamthungo.
Sebenzisa udlawana ukuze uxebule ngokucophelela imivimbo kusuka kuthileyi.
Kubalulekile lapha ukuthi uthathe imivimbo ekhoneni le-band ukuqhuma futhi ugweme ukuyicosha ku-eyelash uqobo uqobo. Lokhu kungenxa yokuthi kungenzeka kulimaze i-eyelash ngaphambi kokuthi uthole nethuba lokuyifaka.
Thola ubude kahle!
Ukuze uqiniseke ukuthi ulingana kahle, bamba ukuqhuma esweni lakho ngekona langaphakathi (elincanyana) lokuqhuma ngaphezulu kwephuzu lapho imivimbo yakho ikhula khona. Uma ukuqhuma kukude kunejwabu leso lakho, nquma okweqile emaphethelweni angaphandle.
Yenza ukwakheka kwenziwe
Lapho nje imivimbo yakho engamanga isilungele ngokuphelele ukusetshenziswa ijwabu leso lakho, engeza ungqimba lwezambiso bese kuba ijazi le-mascara, njengoba ubungajwayele. Zizwe ukhululekile ukusonga ama-eyelashes akho emvelo futhi uma uzwa lokho 'kungeziwe' okuncane.
Faka isicelo se-eyelash glue
Ukubamba ukuqhuma ngezidladla, faka ungqimba oluncane lokunamathisela ukuqhuma eceleni kwebhande lokuqhuma. Lokhu kubukeka njengokulula kepha khumbula ukuthi njengalo lonke uhlelo lokusebenza lokunamathisela, kuncane okungaphezulu.
Usebenzisa umfakisicelo noma ibhulashi elincane, sebenzisa nje ungqimba oluncane lwengcina eceleni kwebhande lokuqhuma ukusuka ekugcineni kuze kube sekugcineni. Isinamathelisi siyoqina ngokwanele ukuqinisekisa ukuthi i-eyelash yamanga ehlala isikhathi eside. Ngemuva kwalokho linda imizuzwana embalwa kuze kube yilapho okunamathiselwe kungene.
Into eyodwa esemqoka lapha, ungasebenzisi i-adhesive ngqo kwijwabu leso. Isinamathelisi sizoma futhi ukusebenza kwaso kuzoncipha ngokushesha. Ungaba sengozini yokulimaza ijwabu leso neso lakho.
Sebenzisa ama-eyelashes amanga
Usebenzisa udlawana lwakho, phusha ukuqhuma ngokucophelela maphakathi nangaphambili. Beka ngokucophelela ibhande lokuqhuma ngqo esikhumbeni ngenhla nje kwemivimbo yemvelo yakho. Ngomusa donsela phansi i-eyelash yamanga kusuka komunye umkhawulo ukuze usondele eduze kwezinkophe zakho zemvelo ngangokunokwenzeka.
Uma usenelisekile ngokuma kokuphamba, bese usebenzisa ingcindezi emnene ebhendi yokuqhuma imizuzwana embalwa ize isethwe. Ekugcineni, bamba izingxenyana zokuqhuma imizuzwana embalwa ukuze uvikeleke.
Hlanganisa bese uphinde uhlanganise!
Usebenzisa i-mascara, thinta kancane i-eyelash yamanga ukuqinisekisa ukuthi ihlangana nemivimbo engu yakho yangempela. Ungasebenzisa futhi i-eyeliner ngaphesheya kwe-band ukuqhuma okungamanga ukuyinika ukubukeka okungokwemvelo nokuthembekile. Ngokwemvelo, lokhu kuyasebenza njengoba ubona kufanelekile futhi akukho ukuhlangana mhlawumbe okudingekayo.
Usebenzisa iminwe yakho, cindezela ngokucophelela imivimbo ukuze ukhuthaze ijika. Lokhu kuzosiza ukubenza babukeke njengevolumu ethe xaxa bese beyiphotha ngaphambi kobusuku obukhulu obungaphambili.
Ama-eyelashes ethu amanga adlulile isitifiketi se-RoHS, ungaqiniseka ngokuqiniseka kwethu ngekhwalithi nokuphepha komkhiqizo.
Ngeminye imibuzo, wamukelekile Xhumana nathi ukuthola eminye imininingwane nganoma yisiphi isikhathi. Ithimba lethu lokuthengisa lizophendula yonke imibuzo yakho kungakapheli amahora angama-24.
Langaphambilini Isitolo esidayisa yonke impahla ngokwezifiso Amalebula Amalebula e-3D Imivimbo engu-100% Abathengisi Bama-Real Mink Eyelashes
Olandelayo: I-ALLISON Style Wholesale Label yangasese engu-25mm Mink Eyelashes
Factory Isitolo esidayisa yonke impahla Fluffy 3d 100% Mink eyelashes ...
Amanga Eyelashes Umkhiqizi Isitolo esidayisa yonke impahla Private ...
Bulk Easy To Sebenzisa Full Strip 3d 5d 100% Mink L ...
Kwenziwe ngentando Label Private Eyelash Box Bulk Lon ...
Bulk Eye nemivimbo engu Manzi esebenza Classic 3d ...
Izandiso ze-Eyelash, imivimbo ye-mink, Abadayisi bezinkophe, Ukuqhuma Kwamehlo, ezambiwa, i-eye liner,